musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Guestpost » Imba Detox yeDoro Yakapindwa Muropa
Hapana mubvunzo kuti zvakakosha kukunda kupindwa muropa kunokanganisa hupenyu nekuparadza zvese zvirongwa. Nekudaro, dzimwe nguva, zvakaoma kwazvo kuve mukiriniki nevasingazive kure nemhuri uye mhepo yekumba. Neraki, pane chirongwa chekuvandudza, chinobatanidza simba rekutsigirwa kwemhuri uye nerubatsiro rwehunyanzvi.
Mukurwisa kupindwa muropa, detox yekumba mukana kune vakawanda.
Izvi zvinogoneswa kuburikidza nemidzi yedoro detox masystem ayo anosanganisira akatemerwa mishonga uye nhare kubvunzana nachiremba vekiriniki.
Vanachiremba, varapi, uye vanamukoti, vanowanikwa 24/7 kuti vape nhungamiro, kufambira mberi, kurumbidza, kana kutsigira.
Kusarudzwa kwa doro detox kumba mukana wakakwana wekurwisa kupindwa muropa nekudzivirira kuwira pasi pehupenyu hwevanhu.
Zvimwe zveImba Detox Chirongwa
Izvo zvinodikanwa kuti utarise kuti kugadzirisa kumba hakuna kukodzera kune wese murwere. Pamberi pekutanga kwatanga, nyanzvi dzinofanirwa kuita ongororo, kuongorora kuongorora, uye kuongorora mamiriro azere.
Izvo chete ipapo, kana nyanzvi dzikasatsanangura kupindwa muropa sechinhu chakakomba, zvinokwanisika kupa detox yekumba.
Imwe yemakiriniki ekurapa ekuvandudza muUK Serenity ( https://www.rehabclinic.org.uk/locations/drug-alcohol-rehab-clinic-london/ ) inopa ese maviri marudzi edoro rehab - inpatient uye outpatient (imba detox).
Serenity Addiction Centres inotakura doro redoro rekumba, iro rinosanganisira kutora mishonga yakatemwa uye kubvunzana nhare nevanoona nezvekiriniki.
Usafunge kuti kumba, murwere anogara ega. Nyanzvi dzeSerenity, senge maGP, varapi, uye vanamukoti, vanowanikwa 24/7 kuti vape nhungamiro, kufambira mberi, kurumbidza, kana kutsigirawo. Uyezve, ivo vanodzora nhanho dzese dzechirongwa uye vanoteedzera mafambiro.
Nei Uchifanira Serenity Outpatient Chirongwa
Zvakanakira iyo Serenity imba detox rehab:
Kubvunza kwefoni uye zvikamu zvekurapa
Nutrition uye zvirongwa zvekudya
Kuwanika kumatenzi-makirasi eakanakisa doro kupindwa muropa nenyanzvi
Zvinodhaka kubata kubvisa zviratidzo
Zvakare, funga kuti kugadziridzwa kwemusha kwakachipa pane kurapwa kwechipatara.
Ehezve, detox yekumba inoreva mwero wepamusoro kwazvo wekusununguka kwemurwere uye mutoro. Kana paine kusahadzika pamusoro pehana yako, zvine musoro kutanga neinpatient rehab uye wozoenda zvishoma nezvishoma kuchipatara chiri kure.